Ukunakekelwa Kwabesilisa | Amadoda anesitayela (Ikhasi 2)
Thola indlela yokugwema i-cellulite emadodeni. Lawa mafutha asabekayo angavinjelwa ngokuphumelelayo ngomkhuba wokuphila okunempilo.
Thola izindlela ezingcono kakhulu ongazivimbela lapho ingane yakho ingakuhloniphi futhi ingaphila ngokuzwana.
Amadoda nawo alwa nenkinga yokugcinwa koketshezi futhi ngenxa yalokho afuna ukwazi ukuthi angalwa kanjani ne-cellulite.
Amadoda amaningi noma intsha ihlushwa i-frenulum emfushane ngaphandle kwesiqiniseko sokwazi ukuthi ingakwazi yini ukuyilungisa ngokwayo. Kwabanye...
Uma ungokwemvelo, ugcwele imizwelo eyakhayo futhi uhlale unokumomotheka okuhle, unakho konke ukwenza umfana athandane. Thola!
Ukuba khona kwegazi emchameni kungabangela uhlobo oluthile lokunengeka. Uma udinga ukwazi ukuthi ziyini izisusa zabo, hamba uthole.
Thola igxathu negxathu ukuthi ungazisika kanjani izinwele zomfana. Uyabona ukuthi akuyona yini into enzima kangako uma uyenza ngokubekezela.
Thola amathiphu nezeluleko ezinhle kakhulu zokwazi ukuthi amadoda anamuhla kufanele agqoke kahle kanjani. Abanye bakhohlisa ngokuqinisekile ukuthi lokho kuzokusiza.
Izingane nazo zingasetha isitayela sazo ngokuqunga isibindi ukwenza izinwele zesimanje zabafana. Zonke zilungile, thola!
Uma ufuna ukuba nentshebe kanokusho, lapha sibonisa ukunakekelwa okungcono kakhulu nokwelashwa ukuze ukwazi ukubonisa ukuhleleka okuhle kakhulu.
Thola zonke izindlela nezindlela zokuthi ungasusa kanjani izinwele zowesilisa, nazo zonke iziqinisekiso nezibonelo.
Sikunikeza amathiphu amahle kakhulu ukuze i-jean isetshenziswe emadodeni amafushane. Ungazi nokuthi ungazigqoka kanjani nganoma iyiphi ingubo.
Kungani izinwele zami ziwa
Ukulahleka kwezinwele kuyinkinga kubo bobabili abesilisa nabesifazane. Thola wonke amakhambi okuthi "kungani izinwele zami ziwa nokuthi uzilungisa kanjani".
Ungayisusa kanjani iHickey
I-hickey iluphawu olungenakuphikiswa lwesikhashana sothando. Yize kubonakala kumangalisa kunezindlela nezindlela zokususa ...
Ungayiqinisa Kanjani Ama-Quadriceps Akho
Sinezivivinyo ezinhle kakhulu zokukwazi ukuqinisa ama-quadriceps. Futhi uma uhlushwa amadolo sincoma amasu amahle kakhulu.
Thola ukuthi ungakususa kanjani ngandlela-thile futhi ugweme ukuqubuka ngemuva kokugcwala. Ngalezi zeluleko isikhumba sakho sizobukeka siphilile.
Ama-bangs emadodeni asetha izitayela futhi lapha sinikeza ukubuyekeza okuncane kwalokho okugqokwe kulo nyaka nokuthi yiziphi izinwele zanamuhla zokuzigqoka.
Ungawalahla kanjani amafutha esiswini ngokushesha nangempumelelo
Uma uthathe isinqumo sokuma esimweni futhi ungathanda ukuthuthukisa ukubukeka kwakho, siphakamisa amaqhinga nezindlela ezinhle kakhulu ...
Ukuphuma ekungabazeni sixazulule umbuzo wemibala ethandwa kakhulu lapho ugqoka owesilisa. Ngaphandle kokungabaza, kuzoba usizo kuwe.
Uma uthanda ukufaka intshebe uye ekugcineni, sinazo zonke izitayela nomumo wazo ukuze ukwazi ukukopisha ukuthi iyiphi ekufanele kakhulu.
Ngentshebe noma ngaphandle kwentshebe? ngaphansi kwale mpikiswano enkulu singacacisa ukuthi amadoda nabesifazane abaningi bacabangani, ukuthi bayayigqoka, noma cha.
Ama-hemorrhoids noma abizwa nangokuthi izinqwaba yilawo maqhuqhuva noma izigaxa ezibonakala zivuvukile eduze kwendunu, ngakho ...
Amakhambi asekhaya enkwethu nobunzima
Thola amakhambi asekhaya ukuqeda inkwethu nobuhle obubangelayo. Lezi zithako zemvelo futhi ngeke zikucasule.
Ukudla okune-vitamin D eningi
Thola ukubaluleka kokudla uvithamini D ekudleni kwethu nokuthi kuzuzisa kanjani emzimbeni wethu.
Ungazigunda kanjani izinwele ekhaya
Funda ngesifundo sethu esincane ukuthi ungazisika kanjani izinwele ekhaya. Akungabazeki ukuthi kuzoba inketho ongazama futhi uqinisekise ukuthi ingenziwa.
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nenkwethu yentshebe nokuthi ungayilungisa kanjani. Funda kabanzi ngakho lapha.
Ukudla kwamasosha kwenzelwe ukulahla ngokushesha ama-3 kuye kuma-5 kilos ngezinsuku ezintathu. Thola ukuthi ungakwenza kanjani nokuthi uqukethe ini.
Ungayenza kanjani amashiya akho
Thola wonke amaqhinga nezindlela zokuthi ungawathola kanjani amashiya ebusweni besilisa. Uzokwazi ukuthi kuyingxenye yokunakekelwa okuhle.
Wazi kanjani ukuthi uzoba nempandla
Kunezinkomba eziningi ezinganquma ukuthi uzoba nempandla. Ukuya ujule kulesi sihloko, thola ezinye izixazululo.
Izitayela zezinwele ze-Hipster zamadoda
Izitayela zezinwele ze-hipster zisemfashinini futhi unyaka nonyaka ziphinde zenziwe kabusha ngokuthinta okukhethekile nokuthophayo. Thola izitayela nokudalwa kwazo.
Kuhlanganiswe emuva emadodeni
Izitayela zezinwele ezingemuva emadodeni kungenye inguqulo ezokwazi ukukhanyisa izinwele ezinde. Thola ukuthi ungakwenza kanjani.
Umehluko phakathi kwe-ubersexual ne-metrosexual: yini ngayinye?
I-Ubersexual ne-metrosexual imiqondo emibili yamadoda amakhulu, abesilisa kakhulu futhi abazinakekelayo, kepha banokungafani kwabo esikubonisa lapha
I-frenulum emfushane ingaba yinkinga enkulu kwamanye amadoda, lapha sikutshela ukuthi ungasithola kanjani isisombululo esihle kakhulu.
Uma ufuna ukufaka icici endlebeni yakho futhi ufuna ukwazi intengo yalo, lapha sibonisa ezinye zezindawo ongakwenza kuzo.
Sikunikeza izinwele ezishefiwe kakhulu zamadoda ukuze ukwazi ukukhetha efanelana kahle nesitayela nobuntu bakho.
Abesilisa bathanda ukukhombisa isilinganiso esihle okhalweni kuya ehlombe. Abaningi bane-physiognomy yokuba ne ...
Amadevu abelokhu egqokwa futhi ephawule igunya nobuntu. Thola wonke amakilasi manje asetha izitayela
Imibala emihle kakhulu yezinwele yamadoda
Ucabanga ngombala wezinwele ohlukile? Uma lokhu kuyisiphakamiso sakho, lapha siphakamisa imibala emihle kakhulu yezinwele yamadoda.
Ungazithola kanjani izintshebe ezigcwele
Sigqamisa amathiphu amahle kakhulu ukuze ukwazi ukugqoka intshebe egcwele ngeziqinisekiso, ngamasu athile namasu alula.
Izitayela zezinwele zakudala nokusikeka kwamadoda
Kwabesilisa abaneSitayela sikunikeza izitayela zezinwele ezihamba phambili noma ukusikwa okungaphumi ngaphandle kwesitayela, ngoba bayaqhubeka nokumaka ubuhle nemfashini.
I-kettlebell swing uhlobo lokuzivocavoca olususelwa ku-kettlebell noma ukuzivocavoca umzimba okusetshenziselwa izinhlelo zokuqina.
Ungayithola kanjani imvume ye-wavy ezinweleni ezimfushane
Thola ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele ukuthola imvume ye-wavy ezinweleni ezimfushane. Kuyinto yekhanda manje esethambekisayo.
Thola izitayela ezahlukahlukene zemfashini ezenzekayo nezizoqhubeka kumashumi eminyaka nasezikhathi zokugqoka zamadoda.
Thola ukuthi ungakudla kanjani ukudla okune-astringent ukuze ulawule ukuhamba kwamathumbu futhi ungangeni ekushodeni kwe-hydration noma izakhamzimba.
Okhilimu abahamba phambili bemibuthano emnyama yabesilisa
Senze ama-okhilimu amahle kakhulu emibuthanweni emnyama yabesilisa, lapho kukhonjiswe imiphumela emihle yokuguga.
Ukuphela kusikwe endodeni
Thola zonke izitayela nokusikeka okuvela ku-Fade hairstyle. Ukunqunywa kwezinwele okuqhubeka nokusetha ukuthambekela ngakho konke ukuhluka kwalo.
Izitayela zezinwele zikaDavid Beckham
UDavid Beckham uyisithonjana semfashini yamadoda, uthathe umhlalaphansi ebholeni lesiNgisi isikhathi esingaphezu kwamashumi amabili ...
Ukumisa isifuba, yebo noma cha?
Sikutshela zonke izinkinobho okufanele uzicabangele ukunamathisela isifuba sakho noma cha. Funda ngamathiphu amahle kakhulu lapha.
I-Platinum blonde emadodeni
Eminyakeni eminingana edlule i-platinum blonde yaqala ukuthatha indawo yamadoda amaningi. Kusethwe umkhuba futhi bebengabanye abadumile ...
Ukuqondisa izinwele emadodeni
Thola izikhungo eziningi ezikhona zokuqondisa izinwele, ngezokwelapha, imikhiqizo noma amadivayisi alokho kuqeda okuhle
Izinwele eziluhlaza okwesibhakabhaka
Kwabesilisa abaneSitayela sinikeza imibono emihle kakhulu yokuthi ungazifinyelela kanjani izinwele eziluhlaza okweqa umthetho, ezinamandla nezimiselayo.
Uzilulaza kanjani izintshebe
Ukwehlisa isilevu kwakha isitayela esisebenzayo esiveza ukuheha kobuso bendoda. Thola ukuthi ungakwenza kanjani ngempumelelo.
Isikhumba sekhanda esinamafutha emadodeni
Thola konke odinga ukukwazi ukunakekela izinwele ezinamafutha, kusuka kumikhiqizo, ukunakekelwa kwabo kanye nemikhiqizo efanele.
Izimonyo zabesilisa yinto etholakala futhi esikhwameni samathoyilethi sabesilisa abaningi. Thola eminye imikhiqizo ekhona emakethe.
Sikutshela amasu amahle kakhulu wokuqeda amafutha ngaphandle kokuhlinzwa futhi unciphise isisindo sezulu esihle. Faka futhi wazi konke ngakho.
Sikutshela amaqhinga amahle kakhulu wokusebenzisa i-shampoo eyomile futhi uthole imiphumela emihle. Funda kabanzi ngakho lapha
Thola izinzuzo nezinkinga ngalokhu kwelashwa kwe-micropigmentation, okusetshenziswa kakhulu kubantu besilisa.
Izinhlobo zobuso besilisa
Sizokwazi izinhlobonhlobo zohlobo lobuso bendoda ukuze ukwazi ukuhlola ukuthi hlobo luni lwekhanda ongalugqoka ngokuya ngokuma kwakho.
Ukuhlanzwa ebusweni emadodeni
Sikutshela yonke into okufanele uyicabangele ukuze wenze ukuhlanzwa kobuso okulungile emadodeni. Yazi konke lapha.
Sinesigaba esithakazelisa kakhulu sezinwele ezinhle kakhulu kubo bonke labo bantu abafuna ukuhlala besimanje.
Kwabaningi, amafutha okuthambisa ubuso bendoda asevele aba yinto ejwayelekile. Thola ukuthi yikuphi okuhle kakhulu emiphumeleni yakho
Thola konke ukunakekelwa nezindlela zokugqoka izinwele zakho ukufeza lokho kubukeka okungakahleleki nokungahlelekile, kuzomaka isimo sakho nesitayela sakho.
Ungayivumela kanjani i-Perm on Men
Uma ufuna ukushintsha ukubukeka sifuna ukukunikeza ukuthi imvume iyindlela engeke ikushiye ungenandaba, sizonikeza imininingwane yokuthi ungayenza kanjani.
Ukudaya izinwele ezimpunga zomlotha
Izinwele ezimhlophe zithathe imfashini enkulu kwabesifazane nabesilisa abafuna ukugqoka lo mbala futhi lapha sikukhombisa ukuthi ungazidaya kanjani.
Kubo bonke abesilisa abaqala ukuba nekhefu ezinweleni zabo sikunikeza amathiphu amahle kakhulu wokugqoka izitayela zezinwele ezihamba phambili zamadoda
Ziyini izinzuzo zamathambo?
Ama-tattoos yileyo midwebo ebekwe esikhunjeni, ethula imibala ngaphansi kwe-epidermis, athola izinzuzo zayo.
Ku-Men with Style sikunikeza nezeluleko ezinhle kakhulu ukuze ukwazi ukunakekela izinyawo nezandla zakho. Umzimba wakho uzokuthokozela.
Amakhabethe e-UV: amathiphu nezixwayiso
Amakamelo e-uva-ray angenye indlela ukuze abantu bakwazi ukukhombisa leyo tan enhle emzimbeni noma kunini lapho sifuna khona.
Izinwele ezimpunga kumuntu
Izinwele ezimpunga emadodeni zithathe ukweqa ngokungafani, manje sekuqhutshwa ngayo yonke impumelelo emakhanda amaningi ngaphandle kokuya ngeminyaka.
Izikhwama ezingaphansi kwamehlo emadodeni
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngezikhwama zamehlo emadodeni nokuthi ziyini izimbangela kanye nokwelashwa kwazo.
Le vesti isiphenduke ingubo yenguquko uma kukhulunywa ngokugqoka okuhle, yingakho kungafanele ukuthi ilahleke ekhabethe lethu.
Imidwebo engalweni siyibona ibhekisisa izinkulungwane zeminyaka emasikweni ahlukene, futhi emasikweni ethu siyibona igxilile.
Izitayela zezinwele ezimfushane zamadoda
Ngale mfashini wakamuva ngezinwele ezimfishane, lapha sikushiya okuhle kakhulu okumaka isitayela nokuqala.
Ukugqoka kahle luphawu lobunikazi, ukugqoka izingubo ezifanele ezisinikeza lowo mbono wokugqoka kahle nokunambitha.
Izinwele zezinwele zabesilisa abanempandla
Sikutshela ukuthi yiziphi izinwele ezinhle kakhulu zamadoda anempandla. Funda kabanzi mayelana nezinwele ezizosiza ukunciphisa ukubukeka kwempandla.
5 imibono yezipho zabazali
Awuqinisekile ukuthi uzonikani uyihlo? Lapha sikukhombisa imibono eminingi yezipho zabazali. Faka bese uthola amathiphu amahle kakhulu.
Sibuyekeza ukushefa komzimba okuhle kakhulu ongakuthola emakethe ukuze uqede futhi usebenze ezingeni lakho.
Amakha ayimfuneko kwabaningi. Futhi ukuthi amakha amahle enza umuntu afiseleke, athandwe ...
Kubathandi be-tattoo ungathola incazelo, isiko namafomu okuqukethe i-tattoo yaseSamoa. Imfashini esikweni lethu
Imvume evuthayo yamadoda
Imvume ye-wavy iyindlela ezuzisayo kulawo madoda afuna ukusongwa okumangazayo. Thola ukuthi inqubo yakhe injani.
Amacici ayindilinga yamadoda
Amacici njengamacici aqhubeka nokubeka izitayela phakathi kwamadoda. Lapha ungathola amamodeli wakamuva ozozithanda.
Izitayela zezinwele ezinde
Kukhona izitayela zezinwele ezinde ezakha uthando nomona. Thola ukuthi yiziphi kulezi zinwele ongazigqoka ngaleyo mane enkulu.
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngama-freckles nokuthi uwafihla kanjani. Funda amathiphu ngakho.
Kunokukhethwa okuhle kwamaski obuso kwamadoda emakethe. Thola zonke izitayela nomumo esikunikeza wona ku-Men with Style.
"I-Metrosexual" siyichaza ngandlela thile kubo bonke labo bantu abangabathengi abasindayo bokugcoba namakha okubanakekela.
Yazi ocansini wezingodo
Umuntu ocansana nogodo uhlukaniswa imvamisa egqoke ama-jean, amahembe agqokiwe namabhuthi esikhumba asendle. Yazi okuningi ngaye!
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi nge-seborrheic alopecia, izimpawu zayo nokuthi ungayelapha kanjani.
Ingabe ukunciphisa okhilimu kuyasebenza ngempela?
Abesilisa nabo bafuna ukuba nomzimba ongcono kakhulu futhi kulokhu basebenzisa okhilimu abancishisiwe ukuwufinyelela. Thola ukuthi ziyasebenza yini.
Yini okufanele udle ngaphambi kokuzivocavoca
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi akubalulekile ukudla okuthile ngaphambi kokuzivocavoca futhi kungenzeka ukuthi unephutha. Yidla ngaphambi ...
Amagama athi "umshado ngaphandle kocansi" aba ngesinye sezisho eziseshwa kakhulu ku-inthanethi. Kuyinto eyenzekayo ...
Uma ufuna ukuqala ukuzinakekela, ungasebenzisa lezi zeluleko zobuhle eziyi-9 ukuze uzizwe kahle futhi ukhulise ukuzethemba kwakho.
Yimuphi umuntu ongakaze aphuphe ngokuvela njengendoda ephelele? Futhi ngakho konke ...
Umugqa wamehlo wamadoda wenzelwe lawo madoda wesikhathi sethu. Manje yilapho sebethathe khona ...
Amaprotheni angenye yezinto ezibalulekile emzimbeni wethu. Sikhombisa ukudla okunamaprotheni amaningi ekudleni kwethu.
Khothama izibopho zamadoda
Iminsalo yamadoda ingumkhuba obenza babe semfashinini. Uma unezinwele ezinde futhi ufuna ukuzicosha, bheka izinhlobo zeminsalo ezikhona.
Ama-tattoo ngemuva abonisa amandla nesibindi. Thola ukuthi iziphi izinzuzo nobubi obubikayo nezinhlobo ezahlukene zamathambo ezingaba khona.
Ukunqoba ukulutheka kuyinselelo enkulu, yize lonke usizo lwangaphandle lubandakanya isiyalo esisebenza kahle. Sikukhombisa imihlahlandlela ongayilandela.
Ukwakha intshebe umqondo amadoda amaningi awuchaze njengokulungiswa. Funda ukuthi ungakwenza kanjani ngendlela enhle ngamasu amahle kakhulu.
Amaphuzu avelele e-Blonde emadodeni
Amaphuzu avelele e-Blonde emadodeni ayintandokazi esesemfashinini. Siphakamisa indlela engcono yokuyisebenzisa ekhaya namathiphu amahle kakhulu.
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani intshebe ingakhuli emadodeni futhi lokho kuyenza ibathelele labo abafuna ngempela ukuba nayo. Thola izizathu zayo eziyinhloko.
Thola ukuthi ikhukhamba lingukudla okumnandi okungaqukatha izinzuzo ezibalulekile empilweni yethu. Funda zonke izinsiza zayo.
Ama-alimondi ayingxenye yomndeni wamantongomane, ukudla okubaluleke kakhulu ekudleni kwethu kwaseMedithera. Thola izakhiwo zayo.
Imikhiqizo yokugoqa izinwele
Uma uthanda ukuba nezinwele ezisontekile noma ezijiyile ngezikhathi ezithile, siphakamisa imikhiqizo engcono kakhulu yokugoqa izinwele zakho futhi ngaleyo ndlela sifinyelele ukubukeka okungenasici.
Ugqoka kanjani ngomshado wosuku
Ukugqoka kanjani umshado wosuku akuhambisani kakhulu. Kufanele wazi ukuthi uyinakekela kanjani leyo mininingwane emincane engenza ukuthi ungahambi nesitayela nobuhle
Izinhlobo zebhulukwe labesilisa
Ibhulukwe labesilisa yingubo enquma isitayela somuntu. Kubonakala sengathi kubonakala sengathi ...
Ungazinqoba kanjani izinkinga emsebenzini
Izinkinga emsebenzini zingahlotshaniswa nezimo ezingqubuzanayo. Lapha singakunika okhiye bokuthuthukisa le motif.
Ukuhlikihla izinwele kuyindlela elula equkethe ukubhucungwa isikhumba sezinwele ukuze kusebenze ukusakazeka nokuqeda ukulahleka kwezinwele.
Kukangaki kufanele ugeze izinwele zakho
Impela uke wacabanga kaningi ukuthi uma ukugeza izinwele zakho njalo kuzoba kuhle noma cha empilweni yakho….
Ukukhulisa ukuzethemba kungenye yezinto ezibalulekile ukuze sikwazi ukubhekana nokuphila ngenjabulo nokwazisa ngakho konke okusizungezile. Funda ukuthi yini esingayenza
Ungayisusa kanjani imibuthano emnyama emadodeni
Ngokuvamile, imibuthano emnyama emadodeni ibonakala ingabukeki njengakwabesifazane. Thola ukuthi kungani bephuma nokuthi ungalungisa kanjani ukubukeka kwabo.
Ungaba kanjani nezinwele ezi-curlier
Yize ungahle ungakukholwa, ukuthola izinwele ezisheshayo noma ukwenza imvume, kodwa ikhona. Thola zonke izindlela zokuthola izinwele ezisontekile.
Ungasusa kanjani izinduna
Sikutshela ukuthi ungasusa kanjani izinduna ngamathiphu wemvelo nangempumelelo. Susa la manyala unomphela.
Ukunakekela intshebe yakho: amathiphu amahle kakhulu
Indlela yokunakekela intshebe yakho ayinzima uma ulandela izinyathelo ezimbalwa ezilula. Ku-Men with Style sikucebisa ukuthi ukwenze kanjani ngendlela efanele.
Ama-tattoos amancane abesilisa
Uma uthanda ukuhlobisa isikhumba sakho futhi unikeze iphuzu lobuciko, kepha ngaphandle kokunikeza umdwebo obabazekayo, ama-tattoos amancane emadodeni ayisiphakamiso esihle.
Ungawasusa kanjani amakhanda amnyama emakhaleni
Ingabe ama-blackhead ayakukhathaza? Kulesi sihloko sikukhombisa amanye amathiphu namasu wokuthi ungawasusa kanjani amakhanda amnyama emakhaleni akho.
Ukubona ngamehlo kuyindlela noma inqubo yokubuka ngaphakathi kuwe, yokuzibona njengenhloso eyinhloko. Ukuzijwayeza uchungechunge lwezinyathelo kuzokuholela emgomweni wakho.
Izibuko zelanga ezintabeni ziyinto ebalulekile ukuvikela amehlo ezintweni eziyingozi. Funda ukukhetha okuhle kakhulu.
Ungayidaya kanjani intshebe yakho
Ukudaya intshebe kuyinto eseyenziwe iminyaka futhi iya isetshenziswa kakhulu kuyo yonke imiphakathi. Thola ukuthi ungakwenza kanjani.
Indoda ebukekayo emhlabeni
Singabona kanjani ukuthi ngubani indoda ebukekayo emhlabeni? Impendulo ingeyokuzithoba futhi iyohlala inqunywa ngeso lombukeli.
Ukunakekelwa kwamadoda ebusweni kudinga inqubo efanayo kanye nokuziphatha njenganoma yikuphi ukwelashwa. Noma iyiphi ukhilimu ayifanele futhi lapha sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani.
Ukuchitha isikhathi eside uvalelene nomlingani wakho kuyinselelo enkulu yokusinda. Siphakamisa ukuthi ungathatha kanjani ukuvalelwa njengezithandani kangcono kakhulu.
Abesilisa: unezinwele ezinde kanjani
Uma ufuna ukuba nezinwele ezinde, nazi izeluleko ezinhle kakhulu zokukwazi ukunikeza lolo shintsho futhi uzinike esinye isithombe. Uzoba nemibono engcono kakhulu yokubanakekela.
Ubaba one-Alzheimer's, kufanele siyinakekele kanjani
Ukunakekela umzali one-Alzheimer akuyona icala elingasithinta sonke, kodwa kungenzeka nakuwe uqobo. Lapha sikunikeza izeluleko ezibaluleke kakhulu.
Amadili okudla kwesisindo
Ukudla kwakusihlwa kungenye ingxenye yokudla kwethu nokudla kwethu kwansuku zonke, siphakamisa ukuthi amadina anciphise isisindo futhi akwenze ngendlela elula nenempilo.
Konke okulandela ukulingana kuya ngokuya kuphumelela. Futhi lokhu kuhunyushwe kahle kakhulu ngumhlaba ...
Thola ukusikwa kwentshebe okuhle kakhulu, okuzokusiza ukuthi ulolonge izingxenye ezahlukahlukene zentshebe yakho futhi ufeze imiphumela ehlukile.
Izitayela zezinwele zikaSergio Ramos
Ukuqoqwa kwezitayela zezinwele kukaSergio Ramos kufaka phakathi izitayela zakho konke ukuthanda, kusuka ezinweleni ezimfushane kakhulu kuye kwezide, kuma-toupees kanye nemivimbo eseceleni.
Okuvelele kwabesilisa kuyindlela yezinwele ephikisanayo. Lapha sibheka okuningi ngalesi sihloko ukukusiza wenze isinqumo.
Amakha abesilisa athandwa amantombazane kakhulu
Iphunga esilinikezayo liyindlela yokuyenga umuntu, ngokuhamba kwesikhathi nayo eba ...
Izinwele eziluhlaza zizokuvumela ukuthi ungabonakali. Thola osaziwayo ababheja ngalo mbala ogqamile ngezinwele zabo.
Ungayifaka kanjani izinzipho
Thola ukuthi ungazifaka kanjani izinzipho zesilisa kahle, kanye namathiphu namasu amahle kakhulu wokugcina izandla zakho zibukeka zingenaphutha.
Thola ukuthi imaphi ama-colognes ahamba phambili emadodeni omndeni ngamunye onamafutha: amasha, ezimbali, anokhuni nasempumalanga.
Yazi konke mayelana nekhanda le-samurai. Ungakwenza kanjani, yiziphi izidingo nokuningi mayelana nalesi sitayela sezinwele ezinde.
Ungasusa kanjani isilevu esiphindwe kabili
Faka lapha ukuthola amathiphu amahle nokuzivocavoca kokuthi ungasusa kanjani isilevu esiphindwe kabili. Susa le ngxenye yomzimba ekuxaka kakhulu.
Kulesi sihloko sikufundisa ukuthi ungakwenza kanjani ukuzivocavoca ebusweni ukuze uhlale umncane isikhathi eside. Faka lapha ukuze ufunde ukuthi ungakwenza kanjani.
Thola konke mayelana namashiya abantu besilisa: ukuthi enzelwe ini, wazi kanjani ukuthi kufanele uzilungise noma cha futhi nokunye okuningi ngazo.
Izinwele zezinwele zanamuhla
Thola izinwele ezinhle zesimanje zamadoda. Imibono yokusikeka kwesitayela kwabo bonke osayizi nezinhlobo zezinwele.
Ungayisika kanjani intshebe
Thola ukuthi unganciphisa kanjani intshebe ngesinyathelo. Kusukela kumathuluzi adingekayo kanye namalungiselelo endlela enhle kakhulu yokwehlisa nokuchaza intshebe.
Thola konke mayelana nezinwele ezi-wavy zamadoda: amathiphu wokuphila kwansuku zonke kanye nezinwele zezitayela nemibono yekhanda
Thola izinwele zezinwele ezihamba phambili ngama-bangs wamadoda, kanye nezinzuzo zawo: ama-bangs amafushane, aphakathi naphakathi.
Izinwele amavithamini kungasiza ukunciphisa izinwele. Faka lapha ufunde ukuthi yimaphi amavithamini abalulekile ukuze ube nezinwele ezinhle.
Thola inketho engcono kakhulu kuwe phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zentshebe: intshebe yezinsuku ezintathu, intshebe ende nezitayela eziningi!
Ungaba muhle kanjani
Thola amathiphu amahle kakhulu namasu alula ukuze ufunde ukuthi ungaba muhle kanjani. Faka lapha wazi konke. Ngabe uyafuna ukuyithanda? Yithole!
Ungayikha kanjani amashiya akho
Funda ukuthi ungasikha kanjani amashiya igxathu negxathu. Ungabanika kanjani incazelo, lapho kufanele baqale futhi baphele khona, ubukhulu obufanele nokunye okuningi!
Ungazilungisa kanjani izinwele ezimfushane
Funda ukuthi ungakha kanjani isitayela sezinwele ezimfushane ngesinyathelo ukuze uzuze isitayela sezinwele esingenasici esifana nokubukeka kwakho okungajwayelekile nokuhlelekile.
Izinwele zezinwele eziphakathi nendawo
Ukunqunywa kwezinwele okulingene kuyahlukahluka, kuyathopha, futhi kuyindlela. Thola izinketho ezinhle kakhulu ezikhona zalesi silinganiso.
Thola izinwele ezinhle kakhulu ezisikiwe zamadoda. Kusukela ekusikeni okufushane kakhulu kuya ezinweleni ezinde, kudlula ubude obumaphakathi obumnandi.
Ungayenza kanjani i-toupee
Kulokhu okuthunyelwe uzofunda igxathu negxathu ukuthi ungayenza kanjani i-toupee ukuze isitayela sakho sigqame kubo bonke abanye. Faka manje wazi zonke izimfihlo.
Ungawasusa kanjani amabala egazi ezingutsheni
Thola ukuthi ungawasusa kanjani amabala egazi ezingutsheni. Funda izindlela ezihamba phambili nezisebenza kahle kakhulu ukuze kungasali mkhondo, egazini elisha noma elomisiwe
Uzilungisa kanjani izintshebe
Thola ukuthi ungayilungisa kanjani intshebe yakho ukuze ibukeke ingenasici. Ungayisika kanjani, ungadweba kanjani umugqa wentamo nowesihlathi nokunye okuningi!
Funda ukuthi ungawakhetha kanjani amakha akho aphelele ekukhetheni amakha amahle kakhulu emadodeni. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo? Ngena manje.
Intshebe ithuthukisa ukunxenxa isitayela nobulili kwamadoda amaningi. Kulokhu okuthunyelwe ungafunda ukuthi ungakhulisa kanjani intshebe ngendlela efanele.
Funda ngezinhlobo ezahlukahlukene zembuzi, ukuthi ungayithola kanjani ngayinye yazo, nokuthi yini edingekayo ukuyivimbela ekubukekeni budlabha.
Thola izitayela zezinwele ezihamba phambili zamadoda lapha. Uma udinga ukushintsha ukubukeka kwakho, lesi yisikhathi sakho. Ungaphuthelwa ithuba bese ufaka!
Thola izinwele ezimfushane ezinhle kakhulu ezinhlangothini futhi ubude bube phezulu kwabesilisa. Thola ukuthi zenziwa kanjani, izinketho zezinwele nezinzuzo zazo.
Thola ukuthi ungalungisa kanjani okokugcoba ubuso okuzenzela, yiziphi izinzuzo zayo namathiphu amaningi wokuzisebenzisa kahle.
Thola konke mayelana nokusikwa kwezempi. Yiziphi izinzuzo ezinazo futhi yini ukuhluka okuhlukile kwalokhu kokugunda izinwele okuzalelwe ebuthweni?
Thola konke mayelana nama-depilatory okhilimu abesilisa. Isebenza kanjani, yiziphi izinzuzo abanazo, amathiphu awusizo futhi yiziphi izinhlobo ezinhle kakhulu.
Thola ama-deodorants amahle kakhulu emadodeni, ubuhle nobubi bamafomethi ahlukile kanye nobuhle bamafomula emvelo.
Ukuchusha kuyindlela yokuguqula eya ngokuya iba semfashinini. Funda konke ngaye kulokhu okuthunyelwe.
Funda ngamamaski amahle kakhulu ezinwele, enzelwe ekhaya futhi enziwe ngomumo, kanye namathiphu amaningi ahlobene nokusetshenziswa kwawo.
Thola konke mayelana nezinwele ezimhlophe. Izimbangela, izinketho ezikhona zezinwele ezimpunga, amasu wezimonyo kanye nokudla kanye nokunye okuningi!
Ukuzicwala, indlela yokushuka ngokushesha
Thola ubuhle nobubi bokuzishuka, kanye namathiphu amahle kakhulu wokuthola ithani lokufakelwa elingcono kakhulu.
Thola ukuthi yimiphi imikhiqizo yentshebe oyidingayo endaweni yakho yokugcina inhlanzeko ukuze uthole inguqulo enhle kakhulu yezinwele zakho zobuso.
Thola ukuthi hlobo luni lwenqubo yokuhlanzeka yamadoda enesikhumba esomile edinga nokuthi yikuphi ukudla okulusizo ukukugcina kunempilo.
Ukufakwa kwe-waxing kowesilisa
Thola konke mayelana nokuxhuma kwabesilisa. Izinketho ezinhle kakhulu zezindawo ezahlukahlukene zomzimba, kanye namathiphu amaningi namasu.
Ungawathola kanjani amazinyo amhlophe
Thola imikhuba, amathiphu, amaqhinga nokwelashwa ongakusebenzisa uma ufuna ukuthola amazinyo amhlophe. Uma ufuna ukwenza mhlophe ukumamatheka kwakho, ngezeluleko zethu uzokufeza.
Thola ukuthi ungenza kanjani ukugunda izinwele okuphelile kwabesilisa ngesitayela se-classic nokuthi yimaphi amaqhinga ongazama ukuvumelanisa nesimo sobuso bakho.
Abagundi bezintshebe abahamba phambili
Thola abagundi bezintshebe abahamba phambili emakethe. Amamodeli akalwe kakhulu ahlukaniswe ngamabanga, kanye namathiphu wokuwasebenzisa kahle.
Izishefi ezihamba phambili
Ama-shavers angukhiye enkambisweni yenhlanzeko yamadoda. Lapha sithola amamodeli amahle kakhulu emakethe, ahlukaniswe ngamabanga.
Ibhotela le-Shea, umkhiqizo osetshenziswa kakhulu kwizimonyo zamadoda. Yinaziphi izakhiwo? Zingaki izinhlobo ezikhona? Iyiphi indlela eyiyo yokuyisebenzisa ukuthola imiphumela emihle? Thola izimpendulo zale mibuzo nezinto ezithokozisayo mayelana nebhotela le-shea lapha.
Thola ukuthi yiziphi izinwele ezinde zezinwele zamadoda ezisemfashini nokuthi yikuphi okukuthandayo. Uma ufuna ukuba muhle futhi unezinwele ezinhle, khetha okukodwa kwalokhu okusikiwe kwezinwele ezinde futhi uzophumelela.
Yazi ukuthi ziyini izingqimba zesikhumba, yimiphi imisebenzi eziyenzayo nokuthi yikuphi ukunakekelwa abakudingayo ukubambezela ukuguga nokuhlala uphilile.
Amakhambi asekhaya obuso bendoda yekhulu lama-XNUMX
Indoda yekhulu lama-XNUMX inakekela isikhumba sobuso bayo. Lokhu kufaka ukusetshenziswa kwemikhiqizo yemvelo neyezohwebo namakhambi okulungisa, ukondla nokwelashwa kwe-epidermis.
Amakhilimu omzimba amane wokuthuthukisa inqubo yakho yenhlanzeko
Siphakamisa okhilimu bomzimba abane abazokusiza ukuthi uthuthukise inqubo yakho yenhlanzeko uma uzwa ukuthi unaka kakhulu isikhumba sobuso kunesomzimba.
Sikufundisa ukuthi ungazisika kanjani izinwele zakho ngensingo kagesi, izeluleko okufanele uzilandele ukushefa ikhanda lakho kahle kanye nemishini okufanele uyisebenzise ukugunda izinwele zakho.
Uma unezinduna emhlane wakho, sizokufundisa ukuthi kungani, namaqhinga okuziqeda nokuthi ungazivikela kanjani izinduna emzimbeni wethu. Ngabe uzoyikhumbula?
Okubalulekile ukubumba intshebe yakho
Yazi eminye yemikhiqizo emihle kakhulu yokulolonga intshebe yakho nokwenza izinwele zakho zobuso zihlale zibukeka zingenasici.
Lo nyaka we-2017 ungunyaka wezinguquko, izitayela nezindlela ezintsha. Lezi yizikhathi ezintsha. Zinjani izinwele zezinwele ekwindla?
Gcina isikhumba sakho esinamafutha ngale mikhiqizo esebenzayo
Siphakamisa imikhiqizo emine engcono kakhulu yokulawula imiphumela emibi yesikhumba esinamafutha, esihlangana ndawonye sakhe inkambiso yansuku zonke eqinile.
Ungakuvimbela kanjani ukuwa / ubusika ekushiyeleni isikhumba sakho somile futhi siqinile
Uma ufuna ukuvimbela isikhumba sakho ekubukeni somile futhi siqinile kulokhu kuwa / ubusika, cabanga ukusebenzisa la mathiphu enkambisweni yakho yokuzilungisa yansuku zonke.
Ukunakekela izinwele zakho ngemuva kwehlobo
Uma izinwele zakho ngemuva kwehlobo zimangele futhi zingenakho ukukhanya, kungenxa yokuthi ezinye izinto zasehlobo zilimaze. Ungazinakekela kanjani izinwele zakho ngemuva kwehlobo?
Yimaphi amakha okufanele uwagqoke kwinhlolokhono yomsebenzi?
Enkulumweni yomsebenzi, umqashi uzohlola iziqu zethu zesikhundla esinikezwayo. Amakha udaba olubalulekile.
Amakha amahle kakhulu osuku lokuqala
Uma uzoba nosuku lokuqala, uzozibuza imibuzo eminingi. Izingubo, izicathulo, iziphi izesekeli omunye umuntu angathanda, njll.
Amathuluzi nemikhiqizo yokushefa okungcono
Sikunikeza uchungechunge lwemikhiqizo esezingeni eliphezulu namathuluzi okuthola ukushefa okungcono, okusho ukuthi, ukuvala futhi ngaphandle kwemiphumela engafuneki.
Isitayela sokukhetha okufanele senziwe ngokweminyaka yakho
Ukuthi amadoda awakhathaleli ngezinwele okufanele azikhethe? Akulona iqiniso. Yinto okuthi, njengezingane, sihlale siyibona njalo.
Amakha ngokobuntu bakho
Kwamanye amadoda, ukukhetha amakha kungumsebenzi olula: bayazama, bayayithanda futhi kuphelele lapho. Kwabanye, akulula kangako.
Lawa ngamanye amaphutha abaluleke kakhulu okufanele uwagwebe uma uya kwesinye sezitayela zobuso ezithandwa kakhulu: 'intshebe yezinsuku ezintathu'.
Amakha afanele ehlobo angasisiza ukunikela, endaweni yethu yezenhlalo, ukubukeka nobukhona obuzokwenza umehluko.
Ukunakekelwa kwezinwele ngemuva kwechibi
Amanzi echibini enza umzimba wethu uphumule futhi unikeze umuzwa oyingqayizivele, ngaleyo ndlela ugweme ukucindezeleka nokukhathazeka. Kodwa i-chlorine ayizuzisi.
Ilanga lisishisile isikhumba sakho, ungenzani?
Uma sichanyiswa yilanga, ukuthintana ngqo kungenza ngokweqile. Umphumela uzoba ukuthi usishisile isikhumba sakho. Ngemuva kwalokho ubomvu nokusha kuzovela
Unobuso obunxande? Landela le mithetho yezinwele nezitayela zobuso
Sikusiza ukuthi uthole ukuthi ngabe unobuso obunxande futhi sikunikeza amanye amathiphu amahle kakhulu ekhanda elifanele kakhulu nohlobo lwentshebe.
Iholide 2017: Umhlahlandlela Wokususa Izinwele Wokugcina
Uma udinga i-waxing yomzuzu wokugcina eholidini lakho, lo mhlahlandlela uzokusiza, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngamathuluzi nenqubo.
Kungaziphi izizathu kufanele u-wax?
Yiziphi izinzuzo ongazithola? Yiziphi izizathu zokuthi kungani kufanele u-wax? Akuwona nje umbuzo wobuhle, kunezici eziningi lapho kudlalwa.
Linjani iphunga lamadoda eliheha abesifazane?
Kuyaye kuthiwe amakha abesilisa ayisidakamizwa sowesifazane, kepha lokhu kuzoya ngokuthi kunambitheka kanjani ngamunye wabo. Kunamaphunga ahlukahlukene.
Ungazinakekela kanjani izinwele zakho kuleli hlobo?
Ihlobo, kubantu abaningi, yisikhathi esilindelwe kakhulu sonyaka. Kepha futhi yisikhathi lapho iningi lilimaza izinwele zakho ngenxa yamazinga okushisa aphezulu.
Izitayela zezinwele zobuso 2017: Intshebe emfushane
Intshebe emfushane ingenye yezitayela ezinkulu zobuso zango-2017. Nakhu ukuthi ungayigcina kanjani ngenkathi ikubonisa nokubukeka okubalulekile.
Amathiphu wokunuka kamnandi usuku lonke
Uma ungabaza ukuthi kunuka kamnandi, kuyinto eyaziswa amantombazane, umphakathi futhi ikhokha izabelo ezinhle. Kepha okubaluleke kakhulu ukuthi sizizwe siphephile, sihlanzekile.
Ukugqoka intshebe kuthatha umsebenzi omningi nomzamo omkhulu kunokushefa nsuku zonke. Futhi uma kukhona uhlobo lwentshebe oludinga ukunakwa ngemininingwane, yiHipster.
Izinzuzo zobuso okhilimu ngaphambi kokulala
Namuhla, ukusebenzisa okhilimu ebusweni ngaphambi kokulala akuseyona inqubo ekhethekile yabesifazane.
Izinhlobo ezahlukene zentshebe
Ukukhulisa intshebe kusemfashinini. Kepha akusikho ukulinda ukuthi ikhule. Kudinga ukunakekelwa nokunakekelwa (okuningi noma okuningi njengokucheba njalo ekuseni).
Kulabo abanezinwele ezinde futhi abakhetha ukushintsha ukubukeka, ngaphandle kokuzigunda, kunezinketho eziningi ngaphakathi kwamathrendi ka-2017.
Siyakutshela ukuthi iziphi izixazululo ezikhona zamaphutha athile ajwayelekile abesilisa abenza izinwele ezinhle.
Ungazilungiselela kanjani izinyawo izicathulo zasehlobo
Lo mhlahlandlela uzokusiza ukuthi uqinisekise ukuthi izinyawo zakho azishayisani kuleli hlobo, kanye nokuzivikela lapho ungagqokile amasokisi.
Izinwele ezinhle kakhulu zabesilisa
Njengasemhlabeni wemfashini, umhlaba wezinwele zamadoda nawo uyavela. Ngesizini ngayinye sibona izitayela ezintsha.
Yiziphi izizathu ongaba nazo zokufaka intshebe?
Yize imfashini ifika idlule, ukufaka intshebe kuwumkhuba ongapheli. Ngisho nasehlobo, lapho kuvela amazinga aphezulu okushisa.
Ungayikhetha kanjani i-deodorant ezokuhambisana nawe empilweni?
Izingxoxo zomsebenzi, usuku lokuthandana, noma ukuxhumana nsuku zonke nabanye abantu nsuku zonke kudinga inhlanzeko efanele… nesiphunga semithi esihle.
Ungakuvimbela kanjani ukulahleka kwezinwele
Imvamisa kwenzeka ukuthi ngenxa yobuvila asikulungisi ukulahleka kwezinwele size sibone ukuthi sekuyinkinga yangempela.
Ukufika kwehlobo. Izici zesikrini selanga
Kukhona ukuqwashiswa okwandayo kwesidingo sokusebenzisa i-sunscreen enhle. Ngaphezu kwakho konke, kubalandeli bokugeza okuhle.
Uyazi ukuthi ungakhetha kanjani okuhle kakhulu ngemuva kokushefa kwesikhumba sakho?
Ngokushefa okuhle ngemuva kokukwazi ukuvimbela lolu hlobo lokucasuka, kanye nokulungisa umonakalo ongaba khona ukushefa esikhunjeni.
Izitayela zezinwele zamadoda: ama-braids
Njengoba nje kwakukhona isikhathi lapho ama-toupee ayengumkhuba, ngisho nemibala ekhangayo. Manje kukhona isitayela sezinwele esingaphumi ngesitayela: ama-braids.
UWilkinson Hydro 5, ukushefa okuhle kakhulu nonyaka webhola
Izinsingo zeWilkinson Hydro zigqama ngokuklama kwazo kwe-ergonomic namajika ayindilinga. Isibambo sayo siyasebenza, ukuze sibambe ngokuphelele.
Amathiphu wokushefa ophelele
Yize izintshebe zingena ngezikhathi ezithile ezitayeleni zemfashini, ukushefa ngokuphelele kungenye yamasiko okufanele wonke amadoda alandele.
Ungakuthola kanjani ukushefa okuphelele
Ukushefa okuphelele kungaba nemiphumela enempilo futhi yobuhle. Ngakho-ke, ukuzinikezela nokunaka okwanele kuyadingeka.
Ungayisebenzisa kanjani intshebe uwoyela, ibhalsamu kanye ne-shampoo
Sichaza ukuthi ziyini nokuthi ungazisebenzisa kanjani kahle uwoyela wesilevu, ibhalsamu kanye ne-shampoo, okuyizinto ezintathu ezibalulekile ekunakekelweni kwentshebe.
Khetha uhlobo lwentshebe olufanelana kahle nobuso bakho. Thola ukuthi ungashefa kanjani uma uneround, oval, ende, nezinye izinhlobo zobuso ezijwayelekile.
Ingabe kunenzuzo ukugeza ngamanzi abandayo?
Noma kungabonakala kungafani nakho, ukugeza ngamanzi abandayo kungasilethela izinzuzo ezibalulekile empilweni yethu, ngaphakathi nangaphandle.
Izinwele zikaBrad Pitt ezinhle kakhulu eminyakeni edlule
Sibheka ukugunda izinwele okuhle kakhulu uBrad Pitt aye wakwenza eminyakeni edlule. Kusukela kwimivimbo eseceleni yakudala kuya kuma-surfer manes.
Amathiphu wobuhle emadodeni ngaphambi kokulala
Ukuphuma ubukeke kahle kakhulu, unesithombe esinempilo, kukhona amaqhinga wonke umuntu wesilisa angakwenza ngaphambi kokulala.
Kungani Kufanele Ukopishe isitayela esisha sikaZayn Malik
Uma isizathu esenza uZayn Malik ashintshe isitayela sakhe kaningi kungenxa yokuthi wayefuna ...
Izinwele ezihamba phambili zika-Ewan McGregor Phakathi Neminyaka
Sibuyekeza izitayela zezinwele ezihamba phambili umlingisi waseScotland u-Ewan McGregor azigqokile eminyakeni engama-20 edlule, kusukela ekhanda eligundiwe kuya emapompadours.
Ngalezi zivivinyo uzolahlekelwa amafutha ngokushesha
Kunezinsuku ezimbalwa nezimbalwa kuze kufike intwasahlobo futhi ngazo kuzodingeka sivuselele ...
Amathiphu okushefa okungcono kakhulu
Ukuze uthole ukushefa okuhle kakhulu awudingi ukuba ngungqondongqondo, vele ulandele izinyathelo ezimbalwa esizichazayo kule ndatshana.
Ungayisika kanjani intshebe yakho
Noma kungabonakala kulula, ukugunda intshebe inqubo engathatha isikhathi eside kunokujwayelekile uma singakwenzi kahle.
Uma unentshebe, ukudala umugqa ohloniphekile wesihlathi kuzokusiza ukuletha isithombe esihlanzayo, nesihehe kakhudlwana. Lapha sikuqondisa isinyathelo ngesinyathelo.
Izitayela zezinwele ezidume kakhulu zango-2016
Izinwele zakhe zisikhuthaze ngezizathu ezahlukahlukene unyaka wonke. Lezi yizinwele zezinwele ezidume kakhulu zango-2016.
Ungabuqinisa kanjani kahle ubuso bakho, izinwele nentshebe
Ukuthambisa ubuso bakho, izinwele nentshebe njalo kubalulekile ukwenza isithombe esihle. Lezi zeluleko zizokwenza ube yinkosi ye-hydration.
?? Thola ukuthi yiziphi izinwele ezinhle kakhulu zobuso obuyindilinga, ungazisika kanjani izinwele zakho uma unobuso obunalezi zici? Thola!
Ngakolunye uhlangothi, i-wavy, ibushelelezi futhi yinde. Lezi yizinwele ezinhle kakhulu ezine-bangs zamadoda.
Amathiphu wokulwa ne-alopecia
Uma unempandla, ungaphuthelwa yilezi zeluleko ukuze ugweme i-alopecia futhi unciphise ukulahleka kwezinwele emadodeni ane-AGA.
Ingabe ufuna izinwele zezinwele ezimfushane? Lapha uzothola ukubukeka okuhle kakhulu kwamadoda anezinwele ezimfishane nemikhiqizo oyodinga
Sibuyekeza izinwele ezimfushane zamadoda anezithombe + neziphakamiso ezingaphezu kwezingu-36 ukusetha amathrendi. Ufuna izinwele ezimfushane? Faka lapha
Izinwele Zesitayela EzineMfashini ngeBalmain Hair Couture
Ngabe ucabanga ngoshintsho lokubukeka? Unesithukuthezi ngokugunda izinwele kwakho? Uma impendulo inguyebo omkhulu, ...
5 imikhuba engakwenza ubukeke umdala
Le mikhuba emihlanu ikwenza ubukeke umdala. Ungenzi kube lula kwimibimbi nolayini abahle futhi uphile impilo engenazo.
Konke okudingayo ukwenza izandla zakho kube nombono omuhle kakhulu
Akusekho ukufihla izandla zakho ngokwesaba ukuthi azibukeki. Le mikhiqizo emithathu izokusiza ugcine izandla zakho zibukeka ziphelele.
Amafutha amathathu kuphela owadingayo endlini yakho yokugezela
Ukugcina isikhumba sakho sikhuluphele futhi sikhanya, akudingekile ukuthi ugcwalise indlu yakho yokugezela ngemikhiqizo. Lokhu ukuphela kwemikhiqizo oyodinga.
Ungakuthola kanjani ukushefa okungcono? Silandela izeluleko zikaMnu Porter
Ukuqina kwentshebe ye-Hipster sekuzophela. Empeleni, kule sizini abagundi abagunda kakhulu emhlabeni ...
UNuit D'issey, amakha amasha ka-Issey Miyake
Ngemuva kokuphumelela kukaNuit d'Issey Eau de Toilette, iphunga elisha lika-Issey Miyake, inkampani ivele isungule lolu hlobo ...
Umhlahlandlela ocacile wokuthola amashiya afana nobuso bakho
Ngabe ufuna ukulungisa amashiya akho, kepha awazi ukuthi kanjani? Lo mhlahlandlela uzokusiza ukuthi uwenze ngendlela yokuthi baphelele futhi ngokobuso bakho.
Le yimikhiqizo emine okumele ibe nayo yamadoda anezinwele ezinhle. Ama-shampoos wokukhulisa amandla, ama-toners, ama-gel wokusetha nama-shampoo owomile.
Amaqhinga okuzenzela, alula futhi emvelo okukhipha ubuso
Amathiphu okuzenzela ukukhipha
Ukulahleka kwezinwele: izimpawu, izinhlobo nokuthi ungazivikela kanjani
Ingabe izinwele zakho ziyawa? Thola izimpawu, izinhlobo ze-alopecia nokuthi ungazivikela kanjani ekulahlekelweni izinwele emadodeni. Yikuphi ukwelashwa okukhona? Thola lapha
Ungakuthola kanjani ukugunda izinwele okufushane kuleli hlobo
Siyakuchazela ukuthi hlobo luni lokunqunywa kwezinwele olufanele kakhulu ngokuya ngesimo sobuso bakho nezitayela zamanje zezinwele.
'Undercut': ukugunda izinwele okushanela ku-Instagram
Ngokungeniswa okucishe kube ngama-70.000 okuhambisana nale hashtag, i- #undercut is haircut eshanela ku-Instagram. Isitayela esinemisebenzi ehlukahlukene ...
Izimpumputhe zifikile emfashinini yamadoda ... khulisa izindebe zakho
Imfashini yama-morritos ifinyelele emkhakheni wesilisa. Lapha sichaza ukuthi ungazithola kanjani izindebe ezithambile nezigcwele ukukhulisa ukuheha kwakho.
Kuhlanzekile futhi kuchwepheshe - Ukuhlukaniswa ohlangothini kuzoba ngenye yezinwele zonyaka
Isitayela sezinwele esizohlukaniswa ohlangothini sizoba ngesinye sezibonwa kakhulu ngonyaka we-2016. Sinezinto ezinamandla emigwaqeni kanye nasemgwaqweni.
Sichaza ukuthi ubude be-sideburns yakho kufanele bube yini ukuze ubuso bakho bube mnandi kakhulu emehlweni abantu.
Ngabe ufuna ukuba nentshebe engamanga? Sikukhombisa amaqhinga ongawasebenzisa ukwenza ubuso bakho bufane nentshebe ephelele usebenzisa izindlela ezahlukahlukene.
Sichaza ukuthi amadoda amadala anezinduna kufanele asondele kanjani ekwelapheni izinduna kanye nendlela ejwayelekile yokuzilungisa ukuze avimbele ukuvela kwazo futhi.
Sikunikeza izizathu ezintathu zokuthi kungani wonke amadoda anezintshebe ezinde kufanele acabangele ukushefa ngo-2016.
Ikhanda elisha likaJoe Jonas lingakufundisa into eyodwa noma ezimbili
Amadoda amafushane angafunda izifundo ezibalulekile ekhanda elisha likaJoe Jonas. Lapha sichaza ukuthi kungani.
Izinwele ezisontekile noma ezi-wavy? Vumela ukuthi unqotshwe yi-anarchy yama-80s
Sikhulume ngomkhuba wakamuva wezinwele zamadoda ezinwele ezisontekile noma ezi-wavy, kanye nendlela engcono yokuwulandela.
Ama-Shavers kagesi - Izinzuzo nezinkinga
Sichaza ubuhle nobubi bokushefa kukagesi ukukusiza uthathe isinqumo sendlela yokushefa engcono yecala lakho.
Sichaza ukuthi ungazilungisa kanjani izinwele zakho zangaphansi uma kwenzeka uthathe isinqumo sokufaka le ngxenye yomzimba wakho esimisweni sakho sokukhula.
Izinwele ezimhlophe, isimo esinezinzuzo eziningi kunokubi
Sigqamisa izinzuzo nezinkinga ezinkulu ezihlobene nomfanekiso wezinwele ezimpunga emadodeni.
Amadoda amaningi acasula isikhumba sawo lapho ephuca. Uma ufuna ukwazi ukuthi kungenxa yani, nazi izimbangela eziyishumi eziphezulu zokucasuka ngemuva kokushefa.
Sichaza ukuthi ungayishintsha kanjani insingo yakudala ngokunethezeka okuphezulu nokuphepha.
Kubi yini ukugeza izinwele zakho nsuku zonke?
Siphendula imibuzo yokuthi kubi yini noma cha uma isikhumba sasekhanda sigeza izinwele zakho nsuku zonke.
Isilimo saseFrance, isitayela sezinwele esikahle nesikahle sokufihla okufakiwe
Isilimo saseFrance siwuhlobo lokugunda izinwele eligcwele izinzuzo. Lapha sikutshela ukuthi kuyini nokuthi kungani ihlala ikhethekile ngaphandle kwemfashini.
Izinwele ezintathu zokuhamba 'nentshebe yezinsuku ezimbili'
Uma le ntshebe isikhethiwe, siyazibuza, yiziphi izinwele esizithandayo nazo? Yebo, namhlanje siphakamisa ukubukeka okuthathu okwehlukile ...
Ukwephula umkhonto uvuna amadoda anezinwele ezinde
Abesilisa abanezinwele ezinde kuye kwadingeka babekezelele ukucwaswa nokugxekwa okuningi okungenasisekelo ezikhathini zanamuhla. Lapha siphula umkhonto esivuna bona.
Izinwele Eziphelele Usuku Lonke - Amathiphu Wokulungisa Isitayela Sezinwele nge-Hairspray
Sikunikeza amathiphu okulungisa i-hairstyle nge-hairspray nsuku zonke, egxile ekukhetheni komkhiqizo, ekusetshenzisweni nasekukhishweni kwayo.
Ikhanda eligundiwe nentshebe, umqondo omuhle noma omubi?
Kungumqondo omuhle noma omubi ukuthi uphucile ikhanda nentshebe? Lapha sikunikeza umbono wethu ngakho ngezibonelo zabalingisi abagqoke lokhu kubukeka.
Amaphutha amathathu okufanele uwagweme ngezinwele zakho
Sikutshela okungafanele neze ukwenze ngokugunda kwakho izinwele uma ufuna isitayela sakho sezinwele sithuthukise isithombe sakho futhi wandise ukuzethemba kwakho.
Izimo zomthondo ezivame kakhulu
Emadodeni, ukuma kwepenisi kuyisinqumo esinqumayo sokwenza izikhundla zocansi ezikhiqiza ukwaneliseka okukhulu kwabashadikazi.
Izinto okungafanele neze uzenze nge-sideburns yakho
Sichaza ukuthi yimaphi amaphutha okufanele uwagweme lapho ulungisa ama-sideburns akho ukuze ugcine ubuso obunobunye nokubukeka okuhle ngokujwayelekile.
Enye yezinto ezaziwa kakhulu nge-nutmeg ukukhuthaza inkumbulo nokuhlushwa.
Amathiphu wokufaka i-wax indunu
Ukushefa ingquza ngaphandle kokuzilimaza nokunakekela impilo yesikhumba, kufanele usebenzise i-wax.
Amathiphu wokuvikela izinwele nesikhumba ku-pool chlorine
Kunconywa ukugeza ngaphambi kokungena echibini. Empeleni, lokhu kususa ukungcola okukhona ezinyaweni ekuhambeni echibini.
Indlela yokwenza uwoyela wesilevu?
Uma uwoyela wentshebe usuwenziwe, gcoba kancane kwentshebe uqale empandeni.
Uhlobo oluhle lwentshebe yamadoda anobuso obude
Sichaza ukuthi yiluphi uhlobo lwentshebe oluhamba phambili emadodeni anobuso obude nokuthi kungani.
Ubufakazi BamaGentlemen: Lacoste L! Ve
ILacoste L! Ve es yiphunga elisha nelinesibindi elivela eLacoste elimangaza kokubili ngokwakhiwa kwalo kwasekuqaleni nangamakha alo ayingqayizivele
Awexulwa kanjani amasende?
Ukushefa kuyindlela ejwayelekile kunazo zonke yokususa izinwele emasendeni.
Amathiphu wokusebenzisa i-Vaseline ngezinwele
IVaseline ilungele izinwele ezondlayo kanye ne-hydrating ejulile.
Izici eziningana zingakhuphula ubungozi besifo somdlavuza wendlala yesinye, njengokuthi ube ngaphezu kweminyaka engama-60 ubudala, ube nezinkinga zomdlavuza wendlala yabesilisa emndenini.
Izinzuzo ze-rosemary ngezinwele
Izinzuzo eziphawuleka kakhulu ze-rosemary ukuthi ivimbela ngempumelelo ukulahleka kwezinwele.
Amathiphu wokwenza intshebe ikhule ngokushesha
Okokuqala, kufanele uvumele intshebe ikhule futhi ungagundi phakathi kwamasonto amathathu noma amane okuqala okukhula.
Kulula ukusebenzisa amasu afakazelwe ukuze uphumule, i-yoga, ukuzindla, ukuzazi, ngezinye izindlela ezingakusiza uzizwe ungcono futhi ukhulule umoya wakho ezinkathazweni zansuku zonke.
Amathiphu wobuhle asuselwa ku-Hydrogen peroxide
I-Hydrogen peroxide inezindawo zokulwa namagciwane ezenza umlingani ophelele wokwelapha izinduna.
Ngamahloni ngikhuluma ngezinwele zasesidlangalaleni zesilisa
Sikhuluma ngokungenamahloni ngezinwele zasesidlangalaleni zesilisa: izizathu zokuzinakekela, izinketho zokuzigqoka, izinzuzo ...
Izinwele ezimangalisa zamadoda ngokuhlehla
Sibheka ezinye zezindlela ezingcono kakhulu amadoda anekhefu anazo uma kuziwa ekama izinwele zawo. Uzomangala ukuthi lokhu kubukeka kungaba kumnandi kanjani.
Amathiphu okususa iphunga lezithukuthuku ezingutsheni
Okokuqala, kungcono ukuthatha isinyathelo ngokushesha futhi welaphe izingubo ezinuka umjuluko ngokushesha.
Ungayisebenzisa kanjani ipulagi yangemuva?
Ipulagi yangemuva iyithoyizi elihle lokuya ocansini ukuqala ucansi lwendunu, lincane futhi linokuqonda okuthe xaxa kunethoyizi locansi lendunu, futhi kuhlale kunepulagi ekugcineni ukuze wena nomaqondana wakho niliphathe kahle, futhi nivimbele ithoyizi kusuka ukuhlala ngaphakathi kwendunu.
UFofisano, imfashini yamadoda entsha ehlanyisa abesifazane
Imfashini entsha ebonakale ezinkundleni zokuxhumana, i-fofisano yilowo mkhuba wokuthi amadoda akhombise isisu ngaphandle kwezakhiwo. Noma ukuthi ungaziqhenya kanjani ngomzimba wakho, noma ungewona umlandeli wamakamelo okusinda.
Ungazisusa kanjani izinwele zangaphakathi zomphakathi?
Uma izinwele ezingenalutho zakha induna, akumele zephulwe, kodwa linda ize izibhoboze ukuze izinwele ziphume futhi ukwazi ukuzikhipha.
Amathiphu okuthambisa intshebe
Ukwenza ukhilimu owenziwe ekhaya osuselwe kusheya ukuthambisa intshebe, udinga amagremu ama-50 webhotela le-shea, ama-milliliters angama-25 kawoyela we-avocado namaconsi ama-5 kawoyela obalulekile we-ylang ylang.
Amathiphu wokusebenzisa i-conditioner
I-Conditioner ngumkhiqizo obalulekile wokunathisa izinwele ngemuva kokuwasha.